Gini kpatara Eji ahia ahia? | Martech Zone
Friday, July 6, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Gịnị bụ njikọ ahịa? Wikipedia na-akọwa ya dị ka etiti ndị ahịa, usoro a na-eme data iji gwa ndị ahịa okwu. Ejikọtara ọnụ ahịa ahịa bụ ijikọ na ijikọ niile ngwa ahịa nkwukọrịta ahịa, ụzọ, ọrụ na isi mmalite n'ime ụlọ ọrụ n'ime mmemme na-enweghị ntụpọ nke na-eme ka mmetụta dị na ndị ahịa na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere njedebe dị ntakịrị.
Ọ bụ ezie na nkọwa ahụ na-ekwu ihe ọ is, ọ naghị ekwu ya mere anyị na-eme ya.
Site na Neolane: Todays marketer nwere ihe ịma aka (ma ọ bụ ohere) nke iru ndị ahịa ha site na ihe nwere ike iyi ka ọnụọgụ ahịa na-enweghị ngwụcha. Ndị na-ere ahịa kwesịrị itinye onye ahịa ahụ n'oche ọkwọ ụgbọala, na-enye ha ohere ịhọrọ otu na mgbe ha chọrọ ịnata ozi dị mkpa na / ma ọ bụ zụta. Ọ bụ ọrụ nke ndị na-ere ahịa ka ha tinye data ndị a niile gbasara ndị ahịa na atụmanya iji soro ha kwurịta okwu site na ọwa ndị a kachasị mma n'ụzọ dabara adaba ma bụrụ nke ahaziri iche.
Ihe mere anyị ji eme ya? Nsonaazụ. Nke bụ eziokwu bụ na ịrụ ọrụ n'ime silo na-emetụta ọnụ ahịa nke otu atụmatụ ahụ ma anaghị enweta uru ya. Site na ijikọta usoro gafee ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, email, ekwentị mkpanaaka, vidiyo, na ndị ọzọ na-ajụ ase, itinye ego nwere ohere maka nsonaazụ jikọtara. Ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa anaghị azụta n'otu silo… ha na-eji ngwa ọrụ niile dị mkpa iji nyochaa mkpebi izu azụ ha ọzọ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị anaghị etinye aka na atụmatụ gị, ohere ị ga-etinye na atụmanya belatara nke ukwuu.
Tags: infographicnjikọ ahịanjikọ ahịa ahịaneolane